विक्रम बत्रा - विकिपिडिया
(१९७४-०९-०९)९ सेप्टेम्बर १९७४
७ जुलाई १९९९(१९९९-०७-०७) (२४ वर्ष)
२ सेना जोवन
३ 5140 शीर्ष जीत
४ 4875 को संकीर्ण शिखरमा जीत
पालमपुर निवासी जी.एल. बत्रा र कमलाकान्त बत्राका दुई जुम्ल्याहा ९ सेप्टेम्बर १९७४ मा दुई छोरीहरू भए। माता कमलाकान्तको श्रीरामचरितमानसमा गहिरो श्रद्धा थियो, त्यसैले उनले ती दुवैको नाम लुभ र कुश राखे। प्रेमको अर्थ विक्रम र कुशको अर्थ विशाल हो। पहिले DAV स्कूल, त्यसपछि सेन्ट्रल स्कूल पालमपुरमा भर्ना भयो। सेनाको शिविरमा स्कुल भएको र बुबाबाट देशभक्ति कथाहरू सुनेको कारण सेनाको अनुशासन देखेर विक्रममा स्कूलको समयदेखि नै देशभक्ति प्रबल भयो। विद्यालयमा, विक्रम शिक्षाको क्षेत्रमा मात्र शीर्ष थिएनन्, तर उनी टेबल टेनिसमा पनि उत्कृष्ट खेलाडी थिए र उनले सांस्कृतिक कार्यक्रममा भाग लिए। दुई वर्ष सम्म अध्ययन पछि, विक्रम चंडीगढ़ बसाईयो र चण्डीगढको डीएवी कलेजमा विज्ञानको स्नातक शुरू गर्‍यो। यस समयमा उनी एनसीसीको सर्वश्रेष्ठ क्याडेट चुनिए र गणतन्त्र दिवस परेडमा पनि भाग लिए। उनले सेनामा भर्ती हुने निर्णय गरे र सीडीएस (संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा) को तयारी पनि गर्न थाले। यद्यपि विक्रमले ह हांगकांग मा मर्चेन्ट नेवीमा पनि काम पाइरहेको थियो जुन उनलाई अस्वीकार गरियो।
सेना जोवन[सम्पादन गर्ने]
विज्ञानमा स्नातक गरेपछि, विक्रम सीडीएस मार्फत सेनामा चयन भए। जुलाई १९९६ मा, उहाँ भारतीय सैन्य एकेडेमी देहरादूनमा भर्ना हुनुभयो। डिसेम्बर १९९७ मा प्रशिक्षणको अन्तमा, उनी Jammu डिसेम्बर 1997 मा जम्मूको सोपोरमा सेनाको १ 13 जम्मू कश्मीर राइफल्समा लेफ्टिनेन्ट नियुक्त भए। उनले 1999 मा कमाण्डो ट्रेनिंगमार्फत पनि धेरै प्रशिक्षण प्राप्त गरे। १ जून १९९९ मा, उनका फौजहरू कारगिल युद्धमा पठाइयो। ह्याम्प र राकी नाब स्थानहरू जितेर विक्रमलाई कप्तान बनाइएको थियो।￼
5140 शीर्ष जीत[सम्पादन गर्ने]
यसपछि कप्तान बत्राको टोलीले श्रीनगर-लेह सडकको माथिल्लो पाक सेनाबाट 5140 को शिखर मुक्त गर्ने जिम्मेवारी पायो। क्याप्टेन बत्रा आफ्नो कम्पनीको साथ घुम्न गए र पूर्व दिशाबाट यस क्षेत्रतर्फ लागे र कुनै आक्रमण नगरी उसको आक्रमणको दायरा भित्र पुग्यो। क्याप्टेन बत्राले आफ्नो टोलीलाई पुनर्गठन गरे र उनीहरूलाई शत्रुको लक्ष्यमा प्रत्यक्ष आक्रमण गर्न प्रेरित गरे। सबैभन्दा पहिले टोलीको नेतृत्व गर्दै, उनीहरूले साहसका साथ शत्रुलाई आक्रमण गरे र उनीहरूको चार जनालाई आमनेसामने युद्धमा मारे। पहुँचयोग्य नभए पनि, विक्रम बत्राले आफ्ना साथीहरूसँग २० जून १ 1999 बिहान ३: ३० बजे यो शिखर उठाए। जब क्याप्टेन विक्रम बत्राले रेडियोबाट यो विजय आवाज 'ये दिल मांगे मोरे'बाट बोलाए, उनको नाम सेनामा मात्र होइन तर सम्पूर्ण भारतमा प्रसिद्ध भयो। उही समयमा, विक्रमको कोड नाम शेरशाहको साथसाथै उनलाई 'कारगिलको शेर' पनि भनियो। अर्को दिन, विक्रम बत्रा र उनको टोलीको फोटो को शिखरमा भारतीय झण्डासँग मिडियामा देखा पर्‍यो।￼
4875 को संकीर्ण शिखरमा जीत[सम्पादन गर्ने]
यसपछि सेनाले 4875 को शिखर कब्जा गर्न अभियान शुरू गर्‍यो र यसका लागि क्याप्टेन विक्रम र उनको फौजलाई पनि जिम्मेवारी सुम्पियो। उनलाई र उसको सेनालाई एउटा साँघुरो चुचुरोबाट दुश्मनको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो जहाँ दुबै छेउमा ठाडो ढलानहरू थिए जसको दुश्मन एकल मार्गले भारी रोकेको थियो। कप्तान विक्रम बत्राले प्रक्रिया समाप्त गर्न एक साँघुरो पठारको नजिक शत्रुको आक्रमण गर्ने निर्णय गरे। आक्रमणको नेतृत्व गर्दै, एक भयंकर आमने-सामनेको युद्धमा, पाँच दुश्मन सैनिकहरूलाई एकदम नजिकबाट मार्यो। यस कार्यको क्रममा उनलाई गम्भीर चोटपटक लागेको छ। गम्भीर घाइते भए पनि, तिनीहरू दुश्मनतर्फ लागे र ग्रेनेड फ्याँके, जसले त्यस ठाउँमा शत्रुलाई मिटायो। सबैभन्दा अगाडि उनले आफ्ना सँगी सिपाहीहरूलाई परिचालन गरे र उनीहरूलाई आक्रमण गर्न प्रेरित गरे र भारी शत्रुको गोली हानिको सामना गर्दा लगभग असम्भव सैन्य कार्य पूरा गरे। उनले आफ्नो साथिहरु लगायतका लेफ्टिनेंट अनुज नाय्यरलगायत आफ्नो जीवनको कुनै परवाह नगरी धेरै पाकिस्तानी सैनिकहरूलाई मारे। तर घाउको कारण यी अधिकारीहरू वीरगतिमा पुगे।
उनको असाधारण नेतृत्वबाट प्रेरित भएर उनका सँगी जवानहरूले बदला लिन शत्रुलाई कुटपिट गरे र दुश्मनलाई मिटाएर पोइन्ट 4875 कब्जा गरे।
क्याप्टेन बत्राका बुबा जीएल बत्रा भन्छन कि उनको छोरो कमाण्डिंग अफिसर लेफ्टिनेन्ट कर्नल वाई.के. जोशीले विक्रमलाई शेर शाह उपनाम दिए।
यस प्रकार, क्याप्टेन विक्रम बत्राले भारतीय सेनाको सर्वोच्च परम्परा अनुसार शत्रुको अगाडि आफ्नो उच्च बलिदान प्रदर्शन गरे जुन अत्यन्तै उल्लेखनीय व्यक्तिगत बहादुरी र सर्वोच्च क्रमको नेतृत्व प्रदर्शन गर्दै थियो।
यस अदम्य साहस र बहादुरीका लागि कप्तान विक्रम बत्रालाई मरणोपरान्त १५ अगस्ट १९९९ मा भारत सरकारले परमवीर चक्र प्रदान गरेको थियो जुलाई १९९९ देखि लागू भयो।
↑ "VIKRAM BATRA | वीरता पुरस्कार", www.gallantryawards.gov.in।
विक्रम बत्रा कहानी - देशरत्न
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=विक्रम_बत्रा&oldid=1024457" बाट अनुप्रेषित
सन् १९९९ मा मृत्यु
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक ०९:४२, २८ जुन २०२१ मा परिवर्तन गरिएको थियो।